Fakafaka: ilay fototra tadiavina! | NewsMada
Mahavariana, toa zary miaina amin’ny fakan-tahaka ny Malagasy. Na hita fa randrana tsy manendrika ny tena izao aza, hoentina an-doloha ihany. Ampirisihina mivantana na ankolaka mihitsy aza haka tahaka ny tanora. Ny an’ny tena, tsy hay; ny an’ny hafa, ilingilingiana. Saika ahatazanana io tranga io avokoa ny fiainana andavanandron’ny Malagasy. Toraka izany koa ny kolontsaina. Raha anontaniana ny kolontsaina malagasy ny tanora ankehitriny, azo inoana fa ho vitsy ihany ireo hahalala izany… Fa raha kolontsaina vahiny kosa, ho vitany ny hitanisa izany amin’ny antsipiriany.
Tsy manavanana ny Malagasy loatra intsony ny mitady ny fototra. Tsy toetrany izy io fa teraka avy amina anton-javatra maro. Tsy azo amaivanina rahateo ny fahaizan’ny vahiny mandombo ny sain’ny olona any amin’ireo firenena manaiky sy mety hataony kilalao. Tsy navelan’izy ireo hikaroka intsony ny sain’ny Malagasy fa nezahiny hanaiky ny hotolorana fotsiny.
Ny tontolon’ny fanabeazana sy ny fampianarana no lesoka goavana be nahatonga ny Malagasy ho malaina mitady ny fototra. Tsy nampahafantarina ny taranaka aty aoriana ny halehiben’izany atao hoe « fototr’olona » na olona mahalala sy manana ny fotony izany, hany ka variana naka tahaka… Dia izao no niafaran’i Madagasikara sy ny Malagasy tompony!